BOUGAINVILLEA: NOOCYADA IYO NOOCYADA DHIRTA - SOOSAARKA DALAGGA
Noocyada ugu caansan iyo noocyada bougainvillea
Bougainvillea - warshad aan caadi ahayn oo soo jiidasho ah, meesha uu ku dhashay ee Brazil. Waxay jecel yihiin in ay qurxiyaan baqaar, guryo, iyo lagu koriyo oo leh geedkan, waana mid xoog leh, oo xoqan leh, geedo canabkana leh. Dheef-abuurka wuxuu ku dhacaa oo keliya gooyn, iyo si taxadar leh, bougainvillea abaal marin leh ubax badan.
Ma taqaanaa? Isbeddeli karaa, abuuraya noocyo kala duwan oo dhirta ah, inta aan la siin abuurka.
Maqaalkani, waxaanu eegi doonaa waxa bougainvillea yahay iyo muujiyo noocyada ugu caansan iyo noocyo.
Bougainvillea cajiib ah (Bougainvillea spectabilis)
Caan ka mid ah bougainvillea waxaa la helay qarnigii 19aad, waxaa laga helay meelo dhagax ah oo ku yaal gobollada kulaalayaasha ee Brazil. Si kastaba ha ahaatee, waddamada koonfureed, dhirtaas waxaa loo isticmaalay sidii qurxinta barafka iyo koriyo. Nooca noocan ah ee bougainvillea wuxuu leeyahay caleemo waaweyn iyo caleemo qallalan oo soo jiido cirrid inta lagu jiro ubax.
Ma taqaanaa? Warshadu waxay ku koreysaa si dhakhso ah waxana ay gaari kartaa ilaa 15 mitir oo dherer ah.
In bougainvillea cajiib leh caleemo qurxoon oo xoog leh calaamad u ah qalbi-qaabeeya, leh yar yar raso dhinaca dambe. Bougainvillea waxay leedahay ubaxyo qurux badan oo qurux badan, noocyada noocaas ah ee dhinacyada lafaha ah waxay ku urursan yihiin inflorescences, oo furan laga bilaabo Abriil ilaa badhtamaha-bartamaha. In dhererka, ubax ilaa 5 cm. Waxaa jira inta badan ilaa saddex jarjar oo ah casaan, casaan ama casaan ku wareegsan ubaxyada. Sannad kasta midabka midigta ayaa lumaya. Perianth qaab ah tube, midab jaalle ah-cagaaran. Caleemaha dhirta waxaa lagu daboolaa dhoobo oo waxay gaari kartaa ilaa 9 mitir.
Bougainvillea qaawan (Bougainvillea glabra)
Bougainvillea qaawan waxay u kori kartaa ilaa 5 mitir, si ka duwan bougainvillea cajiib ah, sidaas darteed, inta badan dhirta waxaa loo isticmaalaa sida qol. Gooyo waxay u adkeysaa xanuun la'aan, markaa waxaad samaysan kartaa baadiyaha sida aad jeceshahay. Bougainvillea Blooms ka qaawan laga bilaabo guga ilaa xagaaga hore. Thanks to shaqada xulashada, dhirta ayaa leh palette balaadhan oo ah midabyo.
Ma taqaanaa? Nooca noocan ah ee bougainvillea wuxuu aasaas u ahaa abuuritaanka noocyo isku dhafan.
Xididku waa jeexitaan, qaawan, mararka qaarkoodna laga helaa qanjidhada. Caleemuhu waa dhaan, dhalaalay, oval leh dhammaadka fiiqan, ilaa 15 cm dheer, cagaar madow. Wuxuu soo saaraa casaan, caddaan, oranji, jaale ama guduud. Waxay kala duudduubeysaa mudo dheer iyo dheer. Horumarinta bougainvillea qaawan celcelis, inta badan loo isticmaalo bonsai.
Peruvian Bougainvillea (Bougainvillea peruviana)
Peruvian bougainvillea waxaa helay Alexander von Humboldt oo ka soo jeeda Germany sanadkii 1810. Caleemaha waa muddo dheer, dhuuban, iyada oo aan pubescence, dhawaaqa ukunta-qaabeeya. Si ka duwan noocyada kale, dhirta ayaa leh jilif cagaaran on laanta. On caleemaha yihiin huruud gaaban oo toosan. Ubaxyada bougainvillea Peruvian ee hooska huruud ah. Waxay ka dhigtaa midab guduudan ama casaan ah, qaab wareegsan, dusha sare leh. Ubaxa waxaa sida caadiga ah loo qaabeeyaa si khaas ah, ama koox ka kooban ilaa 3 cutub.
Ma taqaanaa? Bougainvillea Peruvian u Blooms dhowr jeer sanadkiiba, halka noocyada kale ubax kaliya hal mar.
Noocyadaasi waxay si xoog leh u koraan, isla markaa waxay leeyihiin digaag yar.
Foomka Hybrid Bougainvillea
Sannad kasta waxaa jira noocyo badan oo badan oo ah bougainvillea, oo laga helo taranta. At bandhigyada, warshad this waxaa lagu soo bandhigay foomamka qurxinta iyo midabyo cusub. Noocyada ugu caamsan ee isku dhafan ayaa la helay iyadoo laga soo gooyay Peruvian iyo bougainvillea qurux badan. In noocyada this, caleemaha waa weyn oo weyn, caleemaha emerald, ukunta-qaabeeya. Laamuhu waa kuwo xoog leh oo toosan. Marka ubaxyada ubaxu bararayaan, waxay yihiin guduud adag, iyo markay da'da yihiin, waxay bedelaan midabka casaanka ama guduudka. Ubax ee dhirta this ee qaboojiyaha hooska. Mid ka mid ah, oo aan ka yareyn nooca geedka faafin ee geedka la helay, isagoo ka gudbay bougainvillea qaawan iyo Peruvian. Caleemaha cagaaran waxay leeyihiin qaab-firfircooni. Ubaxyo yar yar oo cadaan ah ayaa ku yaalla on afkoda of canabkiin caddayn. Ubaxa waxaa ku jira kooxo xayawaan ah, kuwaas oo ku hareereysan saddex jaraan oo khafiif ah oo midab casaan leh.
Ilaa hadda, waxaa jira tiro badan oo noocyo ah bougainvillea, kuwaas oo loogu talagalay taranta guriga. Waxay ku kala duwan yihiin midabka, xajmiga roogga, qaabka. Waxaa jira xayawaan, seddex xagal, gawaarid iyo noocyo kale oo aan ahayn teraabiyada bougainvillea.
Noocyada ugu caansan:
glabra "Sanderiana" - geedka ubaxu wuxuu udubdhexaad u yahay oo uu leeyahay dhar cadaan ah;
glabra "Cypheri" - waxay soo saareysaa midab casaan;
"Maud Chettleburgh" - naqshado casaan-casaan ah;
"Tamaandhada Casaanka" - midabyo badan oo aan ahayn midab aan midab lahayn oo casaan ah;
"Double Red" - laba laab, midab casaan ah; iyo kuwo kale oo badan.
Next, waxaan tixgelineynaa sharaxaad faahfaahsan ee noocyada ugu caansan ee bougainvilleas.
Noocyada Terry ee bougainvillea
Noocyada Terry ee bougainvillea waxay leedahay midabo qurux badan oo ubax ah. Tusaale ahaan, kala duwanaansho kala duwan ee "Pink Double" oo ku jira midabada casaanka ah; "Double Lilarose" oo ah midab madow iyo casaan madow; "Lateritia" - midabyo jilicsan oo ah ubaxyo cas iyo midab leh, waxay ubaxaan muddo dheer oo aan qabin dareenka. In noocyada kala duwan "yaabay", thanks to beddelaadda gon, waxaa jira laamiyo, midabada of xajmiga kuwaas oo ka duwan kuwa ka mid ah dhirta hooyada. Boorsooyinka casaanka, isla mar ahaantaana, waxay noqon karaan marble cad iyo casaan. Faafinta noocyo noocan oo kale ah waa la fulin karaa oo kaliya dhirta. Noocyada Terry ee bougainvillea waxaa lagu kala soocay kaabayaasha cufnaanta, kuwaas oo ku yaala xagga dambe ee caleemaha.
Noocyo bougainvillea kala duwan
Noocyada kala duwan ee bougainvillea waxaa lagu heli karaa vegetatively by gooyn iyo gooyn. Laanta, qodaxda, caleemaha, xididdada - dhammaan cagaarka. Farshaxanka midabkiisu waa mid kala duwan, waxay noqon karaan labadaba midab badan iyo midab. Kala duwanaanta "Raspberry Ice" waxay leedahay jilbaha kareemka ah ee dhinacyada caleemaha. San Diego Red Variegata wuxuu leeyahay caleemo buluug ah, caleemaha waa casaan. In kala duwan ee "Delta Dawn" caleemaha buluug-cagaaran leh cufan cad, iyo caleemaha dahabka iyo salmon. On caleemaha noocyo bougainvillea kala duwan, waxaa badanaa suurtogal ah in la arko dhibco casaan, ma aha oo kaliya caddaan ama dahab ah.
In noocyo bicolor ah ee laamo, caleemo, qodax iyo xididada midab dahabi ah ama jaalaha ah. Kala duwanaanta noocyada kala duwan ee noocaani waa mid cajiib ah, laga bilaabo jilibka iyo dhibco dahab ama kareem ah si aad u jajabiso qaybo badan oo cagaaran. Noocyada noocan ah ee bougainvillea waxay u koraan si tartiib ah, waxay yihiin xajmiga, waxay u baahan yihiin fiiro dheeraad ah. Waxay kala jajabisaa noocyo kala duwan oo ah bougainvillea sida caadiga ah ee madow. Dhanka kale ee "Bois De Roses", xayawaanku waa midka ugu horreeya, laakiin markaa, beddel midabkooda, u rog khafiif. Isbedeladaas oo kale oo midab leh ayaa lagu ogaan karaa noocyada kala duwan sida "Thai Gold": marka hore, guntimaha waa dahab-casaan, laakiin ka dibna midabkeedu u beddel midab casaan. Isbedelada noocan oo kale ah ayaa lagu ogaan karaa noocyada kala duwan: midabka cad wuxuu ugu dambeyntii helayaa casaan, casaan ama casaan.